Pacific-AA Online Shop | MediBio-Infant Powder (10's) Detail
MediBio-Infant Powder (10's)
2,435 Kyats 2,400 Kyats
ဆေးတွင်ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအမည်များနှင့်ပမာဏ : (Content of Raw Ingredients)
Each 1g contains - ၁ ဂရမ်တွင်ပါဝင်သောအရာများမှာ :
Bacillus subtilis, Streptococcus faecium culture ……… 62.5 mg
(As the number of live-bacterial)Streptococcus faecium culture 2.25 x 108
Bacilus subtilis 0.25 x 108
Thiamine HCl ……………………………………. 0.3 mg
Riboflavin ………………………………………. 0.2 mg
Pyridoxine HCl …………………………………… 0.3 mg တို့ဖြစ်ပါသည် ။
၁ နှစ်မှ ၂ နှစ် : ၁.၅ ဂရမ်တစ်နေ့လျှင် ၄ ကြိမ် ရေ ၊ နို့ ၊ ကလေးအစားအစာ နှင့်တကွ တိုက်နိုင်ပါသည် ။
Bacillus subtilis, Streptococcus faecium culture 62.5 mg
Thiamine HCl 0.3 mg
Pyridoxine HCL 0.3 mg
(Precautions) သတိပြုရန်အချက်များ :
၄ ။ ငယ်ရွယ်သော ကလေးများတွင်အသုံးပြုခြင်း ငယ်ရွယ်သော ကလေးများ ( မွေးကင်းစ ) ၃ လအောက်ကလေးများတွင်ဆေးတိုက်မည်ဆိုပါက ဆရာသို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့်တိုင်ပင်ရမည်ဖြစ်ပါသည် ။
၅ ။ ထားသို ကိုင်တွယ်ရာတွင် သတိထားရမည့်အချက်များ
(၃) ဆေး၏ အရည်အသွေးကို ထိမ်းသိမ်းရန်နှင့် ဆေးမှားယွင်းအသုံးပြုခြင်းမဖြစ်စေရန်အတွက် ဆေးအား တခြား ဆေးဘူးခွံများတွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုခြင်းမပြုရပါ ။ (Storage and Shelf Life)Direction for storage - ထားသိုသိမ်းဆည်းပုံအညွှွန်း :
Well-closed container, store at room temperature (1-30ºC), 24 months from the date of manufactureတင်းကျပ်စွာဖုံးအုပ်ထားသောဘူးနှင့်ထားပါ ။ အခန်းအပူချိန် ၁-၃၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အတွင်းထားပါ ။
၁။ ပေါင်ဒါအမှုန့်အတိုင်းသောက်သုံးမည်ဆိုပါက ပေါင်ဒါကို ရေအနည်းငယ်နှင့်ပျော်အောင်ပြုလုပ်၍ ဖြည်းဖြည်းသောက်ရပါမည် ။
၂ ။ ကလေးငယ်၏ အခြေအနေ အရ ဝမ်းသွားခြင်း ၊ပျို့အန်ခြင်း ၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်းစသည့် လက္ခဏာများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည် ။ အကယ်၍ ဖြစ်ပေါ်လာပါက လက္ခဏာများ ပျော်ကသည်အထိစောင့်ပြီး ပေါင်ဒါအနည်းငယ်ကို ပြန်သောက်ရပါမည် ။ အကယ်၍ လက္ခဏမပျောက်သေးပါက ဆေးအချိန်အဆကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမြှင့်၍ သောက်ရပါမည် ။ ၃ ။ ဤဆေးတွင် များစွာသော ပရိုဘိုင်အိုတစ်နှင့်အာဟာရဓါတ်များပါဝင်ပါသည် ။ ထို့ကြောင့် ဂရုမစိုက်ပဲကွယ်တွယ်ပါက ပိုးမွှားများ နှင့်တခြား ပြင်ပအရာများ ညစ်ပေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည် ။
အောက်ပါတို့ကို သတိပြု၍ လုပ်ဆောင်ရမည် ။ (၁) အသုံးပြုပြီးတိုင်း အဖုံးကို တင်းကြပ်စွာ ပြန်ဖုံး၍ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိမ်းဆည်းပါ ။ (၂) ဇွန်းကို ရေနှင့်ဆေးပါ အသုံးပြုပြီးပါက စိုထိုင်းမှုမရှိစေရန်ဖယ်ရှားပါ သန့်ရှင်းသော အနေအထားဖြင့် လုံခြုံသောနေရာတွင်သိမ်းပါ ။